3 Ụzọ ka Download Deezer Music mfe
> Resource> tọghata> 3 Ụzọ ka Download Deezer Music
Deezer bụ nke mbụ French music website banye ihe na nkwekọrịta a nkwusa ikike 'nzukọ na-akwụghachi artists site mgbasa ozi revenue. Ya mere, Deezer enye ọtụtụ puku free music, niile ekwekọghị, ka ụwa dum. Ma, ọ bụ ihe nwute na i nwere ike na ohere Deezer music online. Nọmalị, ọ bụ agaghị ekwe omume n'ihi na ị na-ege ntị music si Deezer offline, n'ihi na e nweghị download ọrụ nye site Deezer.
Ọfọn, i nwere ike ịjụ otú ibudata Deezer music? Bụ n'ebe a doable ụzọ ime nke a? Ee, anyị nwere bụrụhaala na unu ngwá ọrụ atọ iji mezuo nke ahụ. Ka lelee ha n'okpuru ebe a.
1. akpaghị aka download Deezer music na 1: 1 ezi àgwà
2. amamihe na-aghọta song Ama, gụnyere album artwork, aha na ndị ọzọ
3. Download dum Deezer listi ọkpụkpọ ma kewaa ọ bụla 2 songs na-akpaghị aka
4. Ịtọ oge ibudata na iyo si mgbasa ozi
Olee otú iji Wondershare TunesGo ibudata Deezer music
Nzọụkwụ 1. Download na Wụnye a Deezer music Downloader
Ị nwere ike iwunye a usoro na ma gị PC ma ọ bụ Mac nanị site na iji njikọ n'elu ibudata ya. Dị na-echeta na-eburu ziri ezi version na dabara gị na kọmputa. Ma na-agba yiri Filiks otú ma otu ga-ezu dị ka a version iji gosi ebe a, ma ọ bụ anyị họọrọ onye maka Windows.
Gaba launching nke usoro ihe omume mgbe ya echichi. Mgbe nke ahụ gasịrị a onye ọrụ-enyi na enyi na ọcha window ga-emeghe ka onye na nri gị. Site n'ebe a na, na ị na-niile setịpụrụ ibudata Deezer-awụ ọsọ n'ugwu gị na kọmputa.
Nzọụkwụ 2. Malite ibudata Deezer music
Site Ndekọ window, gaa na elu n'akụkụ aka ekpe ma pịa bọtịnụ sị-edekọ ihe. Mgbe nke a, i nwere ike gaba na-akpọ gị oke nke Deezer songs. Cheta na ogologo oge ka ụda ma ọ bụ egwu na-akpọ na kọmputa gị, MP3 faịlụ ga-anọgide na-kere site usoro si ndekọ usoro.
Mgbe ndekọ dị n'elu, ị pụrụ ịchọta dere tracks na Library. Ma ọ bụ i nwere ike ịkwụsị ndekọ usoro site ọkụkụ Record button ozugbo again.This omume nwere ike ibudata dum Deezer playlist site na ndekọ ma kewaa ọ bụla 2 songs-akpaghị aka.
Gịnị bụ oké banyere usoro a bụ na e wezụga Deezer songs na-ebudatara,-awụ ọsọ n'ugwu zuru ezu mkpado nkọwa nwere ike mata. A na-agụnye album nkà, aha nke song, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 3. agafeta Deezer music ka iTunes
Ị na-achọ gị iTunes mbubata songs si Deezer music? Nanị chọọ na ala òkè nke gị Library window maka button sị Tinye ka iTunes na pịa ma ọ bụ pịa pụọ. Ị nwekwara okomoko nke inwe gị Deezer songs egwuri na gị ibughari Apple Ngwa dị nnọọ site eme iTunes mmekọrịta. Olee otú oké bụ na! Nye ya a agbalị na-ahụ otú o si ele!
Ke adianade do, ga-amasị gị na-edebe gị Deezer songs na e dere gị MP3 mgbasa ozi ọkpụkpọ? Enweghị nchekasị, gị mgbasa ozi ọkpụkpọ nwere ike ịnwe ma ọ bụ inweta ndị ahụ e dere MP3 faịlụ dị ka ya. Nanị-enye tracks dị na Library nke usoro ihe omume a nri-click. A mmapụta menu ga-emere site na nke ị ga-ahọrọ Open na nchekwa nke ga-eduzi gị na MP3 nchekwa. N'ikpeazụ, nanị ịdọrọ ma ọ bụ detuo aka gị media egwuregwu. Ọ bụ ya! Mfe!
Olee otú Download Deezer Music
Deezify bụ a Chrome ndọtị na-enyere gị ibudata Deezer music mfe. Jiri Deezify ibudata Deezer music kwesịrị nnọọ easy.You na mkpa na-akpa-wụnye a ndọtị na gị Chrome na mgbe ahụ gaa Deezer si web ọkpụkpọ ka ịmalite ịkpọ egwu music. Mgbe ahụ, Deezify ga enyere gị aka music faịlụ. The anọru ngwá ọrụ a bụ na ọ pụrụ nanị ga-eji na Chrome.
Audacity bụ ihe audio nchịkọta akụkọ ma recorder.Through ụfọdụ ntọala, ọ ga-eji ka ịdekọ nkwanye audio si weebụsaịtị ka Deezify na ndị ọzọ. Mkpa ka ị mbụ setịpụrụ kọmputa gị ụda ngwaọrụ na-enwe ike idekọ kọmputa playback na mgbe ahụ na-egwu Deezer music na kọmputa gị. Mgbe ahụ, Audacity ike idekọ ọdịyo ịzọpụta gị na kọmputa. Ọdịyo faịlụ Ọkpụkpọ nwere ike ịbụ naanị WAV ma ọ bụ AIFF.
Gbalịa Audacity >>
Tụlee 3 Ngwaọrụ ka Download Deezer Music
Service Ụdị Desktọpụ software Nchọgharị Adon na Imea Desktọpụ software
Main Atụmatụ Audio na ndekọ na hapụụrụ Audio nbudata Audio edezi na ndekọ
Iyo si Mgbasa ozi
Aghọta Song Info
Ịtọ oge ka Download
Otu click nyefee iTunes
1. 1: 1 ezi àgwà
2. mma, ngwa ngwa na anụ arụmọrụ;
3. nkwado nile di iche iche nke nchọgharị
1. ọzọ edezi nhọrọ
1. mụ na mkpa Java nkwado
2. virus omume kọrọ site na ọrụ
3. nkwado Chrome naanị
3. abụghị nanị mere maka ọdịyo ndekọ
Anyị nwere ike ikpe si n'elu tebụl na Wondershare TunesGo kwesịrị oké na kwesịrị ekwesị ngwá ọrụ ibudata Deezer music iji hụ ezi mma. N'ezie, i nwekwara ike gbalịa abụọ ndị nke ọzọ ngwaọrụ ma na-onye na-arụ ọrụ ndị kasị mma n'ihi na ị.
Olee otú Download QuickTime Trailer